नेपालले एटम बम बनाएको होइन, संविधान बनाउँदा भारतलाई के को आपत्ति ?
माओवादी जनयुद्धदेखि संविधानसभासम्म सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । एक गैरनेपाली पत्रकारको आँखाबाट हेर्दा नेपालमा जारी संविधान कस्तो देखिन्छ ? नेपालमा जुन नयाँ संविधान आएको छ, यो अभूतपूर्व छ । किनकि पहिला यस्तो संविधान नै थिएन । नेपालका जनता मात्र नभएर पूरै दक्षिण एसियामा यो पहिलो संविधान हो, जसलाई सीधै जनताका प्रतिनिधि ..
मधेसको मूल माग अहिले राजनीतिकभन्दा पनि भावनात्मक बन्दै गएको छ
संविधान घोषणापछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले टुँडिखेलमा गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोलाउँदा पनि..
नयाँ संविधानले पहिलोपटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम मानेको छ
मुख्य तीनदल मिलेर ३ असोजलाई नयाँ संविधान घोषणाको मिति तय गर्नुभएको छ, नेपालको राजनीतिक इति..
सरकारसँग अब काठमाडौंमा वार्ता गर्दैनौंः राजेन्द्र महतो (अन्तरवार्ता)
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरु बार्ताको..
मधेशी जनताले देश टुक्राउन आन्दोलन गरेका होइनन् : यादव
तीन दल (काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) ले जसरी पनि संविधान जारी गर्ने मुडमा देखिए, अब तपाईहरु..
काठमाडौंमै आएर अशोककुमार मेहताले भने, लिपुलेक पनि नेपालको भूभाग होइन
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी एसियाली प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल मामिलामा भारतका विज्ञ अशोककुमार मेहता बिहीबार काठमाडौं आएका थिए । उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भारत र चीनमध्ये कुन नजिकको छिमेकी हो भनेर छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनको यो अभिव्यक्तिलगत्तै विधान श..
छिट्टै लेबर बैङ्क खोेल्दै छौँ : श्रमराज्य मन्त्री
शुन्य लागतमा मलेसिया लगायत खाडी मुलुकका ६ राष्ट्रमा नीति बनाएर चर्चामा आउनुभएको थियो । अहिले कोरियाका मानव संसाधन बिभाग प्रमुख प्राध्यापक योङ बुक पार्कसँग पनि शुन्य लागतमा छलफल गर्नुभयो ? हैन, कोरियाका बिषयमा शुन्य लागत नभनै न्युन लागतको बिषयमा छलफल गरिएको हो । नेपाली कामदारले नेपालमा गरिने बिमा, मेडिकल, श्रम कल्याणकारी कोष यी स..